I-Samsung Galaxy S10 5G inikwe amanqaku kwi-DxOMark | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy S10 5G inqanaba njengeselfowuni kunye nelona candelo lifoto kwiDxOMark kunye neHuawei P30 Pro
El Huawei P30 Pro yiyo Inkosi yangoku ye-DxOMark inqanaba ethathe indawo yokuqala Umlingani 20 Pro. Nangona kunjalo, emva kokuba eyedwa phezulu kwizikhundla okwethutyana, ngoku iflegi yeHuawei kuya kufuneka yabelane ngesithsaba sayo kunye nefowuni evela kwiimbangi zayo eziphambili, iSamsung.
Isiphelo sendlela esisandula ukufikelela phezulu kwitafile ye-DxOMark yile Galaxy S10 5G. Ngenxa yale nto, ngoku sinookumkani ababini beekhamera. Makhe siqwalasele iindaba ...
I-DxOMark ivavanye i-Galaxy S10 5G kwaye inike amanqaku afanayo ngokufanayo neHuawei P30 Pro, eyi-112. Ikwanike nenqaku langaphambili lekhamera lama-97, elingaphezulu kunelo eyeP30 Pro (89). Oku kuyaqondakala kuba iselfowuni ka-Samsung ineekhamera ezimbini zangaphambili, ngelixa inye kuphela yeHuawei.
I-Samsung Galaxy S10 5G kwi-DxOMark
Ukwahlulwa kwamanqaku ewonke kubonisa ukuba Iflegi yeSamsung ibhetele ekurekhodweni kwevidiyo kuneHuawei P30 Pro, kodwa amanqaku ayo asezantsi xa kufikwa kwimifanekiso eseleyo. I-DxOMark ithi iP5 Pro yomtsalane ye-30x zoom iyinika umda kwiifoto.
I-Galaxy S10 5G isebenzisa iikhamera ezifanayo zokurekhoda ividiyo njenge-S10 +, kodwa inenqaku eliphezulu levidiyo. Isizathu kukuba ukurekhodwa kwe-S10 5G kwi-4K ngokungagqibekanga kuphucula ukuthungwa, ingxolo kunye namanqaku e-artifact. Ukongeza koku, kwathiwa ikhamera ye-ToF yeevidiyo ze-bokeh ayinampembelelo kumgangatho wazo, kuba ayisiyiyo ipharamitha abayivavanya. Nangona kunjalo, eli linqaku ekufuneka liqwalaselwe kuye nabani na othenga enye yeefowuni ezimbini.
Izixhobo ezintlanu eziphezulu kuluhlu lwe-DxOMark okwangoku zezi Huawei P30 Pro (112), i-Samsung Galaxy S10 5G (112), ifayile ye Umlingani 20 Pro (109), ifayile ye- P20 Pro (109) kunye neGPS S10 Plus (109). Inkqubo ye- Xiaomi Mi 9 Utyhalelwe kwindawo yesithandathu, ngamanqaku ali-107.
Inqaku le-Samsung Galaxy S10 5G kwi-DxOMark
Uninzi lwabantu aluthembi ukulinganiswa kwefowuni ye-DxOMark yeselfowuni njengoko besithi abanye babavelisi bayayisebenzisa njengesixhobo sokuthengisa kwizixhobo zabo, nto leyo ekhokelela aba bantu ekubeni bakholelwe ukuba iziphumo zinomkhethe. Nangona kunjalo, i-DxOMark iwulungisile umba kunyaka ophelileyo: yatsho njalo iimvavanyo zakho zisimahla kwaye zilungile, kwaye ikwatsho ukuba abachaphazeleka ngabavelisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy S10 5G inqanaba njengeselfowuni kunye nelona candelo lifoto kwiDxOMark kunye neHuawei P30 Pro
IXiaomi Mi 9 SE yaziswa ngokusesikweni eSpain
Igama lokugqibela: IHuawei ayizukubonelela ngee-chips zayo ze5G kwiApple